China ethengisa eshushu yokugxotha amanzi eengxowa zokungena ezingamanzi zomama zokuzingela zomkhosi mveliso kunye nabenzi | Xueruisha
Ezi ngxowa zokulala zifihliweyo zedijithali ziyilelwe ngokukodwa umkhosi, abaphandi, abazingeli kunye nabo bangabalandeli bezomkhosi. Kukho iintlobo ngeentlobo zemibala yokhetho, ezinokuthi zilungele ukuma kweendlela ezininzi ezahlukeneyo, ezinjengehlathi, isendle, iintaba njl.njl. Ezi zenziwe ngamalaphu eNylon angama-20D 380T, angangeni ngumoya, amanzi agxothayo, amileyo, ashushu kakhulu kunye nokunye ukusebenza ngokugqwesileyo. Njengoko sonke sisazi, ngesiqhelo, indawo esingisa kuyo ngaphandle iyabanda kwaye imanzi, ke ngoko kubaluleke kakhulu ukuba ilaphu leqokobhe liqwalaselwe unyango lwe-DWR (oluQinisekisiweyo lwaManzi), olunokuthi lukhusele ibhegi yakho yokulala kubumanzi ubukhulu obukhulu. Singayitshintsha imibala, izixhobo, izimbo, ubungakanani njl, ngokwesicelo sakho. Le ngxowa yokulala igcwele i-1200g 90% yedada phantsi, uninzi lweefektri zisebenzisa i-85% yedada phantsi okanye i-80% yedada ezantsi, inokuba sezantsi i-80%, kodwa siyanyanzelisa ekusebenziseni i-90% yedada phantsi ngeFill Power ephezulu ye-650+, ethi ingayenza ifudumale kakhulu nakwiindawo ezibandayo. Okwangoku, amazwe amaninzi aseYurophu nakuMntla Melika atyikitye isivumelwano kunye nathi, esimema ukuba sincedise ekuveliseni izixhobo zasemkhosini. Iimfuno ezingqongqo zomkhosi kwiimveliso zingqina ukuba sinamandla awaneleyo obuchwephesha, sisebenzisa izixhobo zokugcwalisa ezikumgangatho ophezulu kakhulu kunye neendwangu ezahlukeneyo ezikumgangatho ophezulu. Ukuqinisekisa umgangatho wemveliso, ukuba uneemfuno zokusetyenziswa kweebhegi zokulala kwindawo efanelekileyo, ngokuqinisekileyo sinokuhlangabezana nesicelo sakho. Siyazi ngokunzulu ukuba abathengi abahlukeneyo baneemfuno ezahlukeneyo, kwaye siya kuzama konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana neemfuno zakho. Sinokubonelela ngazo zonke iintlobo zeenkonzo ze-OEM kunye ne-ODM kuwe nakubathengi bakho, ngenxa yokuba inkampani yethu inamava angaphezulu kweminyaka engama-20 kolu shishino. Ukuthetha ngokuphandle, siyayazi into oyifunayo kwaye siyenze yenzeke.
Uyikhetha njani ibhegi yokulala?
1. Khetha iibhegi zokulala ngokobungakanani bakho: iingxowa zokulala ezincinci kakhulu ziya kuba nzima kakhulu ukuba ujike kwaye ungakhululeki; iingxowa zokulala ezinkulu kakhulu ziya kuchaphazela ukugcinwa kobushushu xa zingenanto.
2. Nika ingqalelo kwinqanaba lobushushu besikhwama sokulala: lonke ixesha, eyona datha ibaluleke kakhulu ekukhetheni ibhegi yokulala sisikali seqondo lobushushu. Isikali sobushushu sihlukaniswe ngedatha ezintathu: umda wokulinganisa ubushushu (oko kukuthi, isikali seqondo lobushushu esisezantsi, kusetyenziswa ibar yeqondo lobushushu oluhlaza okwesibhakabhaka), isikali seqondo lobushushu (eli nqanaba lobushushu lahlulwe laba ngamanqanaba aphezulu kunye asezantsi obushushu ngabenzi abathile, kusetyenziswa umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kuorenji ubushushu bebar), kunye nobukhulu beqondo lobushushu (kusetyenziswa ubushushu obomvu bar).
Egqithileyo Umenzi we-2020 ophakamileyo wama-90% ezele iibhedi zokulala ezinamaxabiso aphantsi
Okulandelayo: Sifihle iqokobhe elingangenisi mqengqeleki ongashukumiyo wokulala emkhosini kwimozulu ebanda kakhulu